Tababare Solskjær oo sharaxaad ka bixiyay mustaqbalka Juan Mata ee kooxda Manchester United – Gool FM
(England) 04 Maajo 2019.Tababaraha reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay inuu doonayo in Juan Mata uu sii joogo garoonka Old Trafford xili ciyaareedka soo socda.
Juan Mata oo qandaraaskiisa uu dhacayo bisha June, ayuu tababare Ole Gunnar Solskjær rajo ka muujiyay suurtagalnimada uu ku saxiixi karo heshiis cusub uu ku sii joogi karo mudo fog kooxda Manchester United.
Yeelkadeeda, tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee Sky Sports ayaa wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Juan Mata wuxuuna yiri:
“Waa shaqsi fiican iyo ciyaaryahan cajiib ah”.
“Wax walba waxay ku xiran yihiin isaga, waxaan la sheekeystay isaga, si wanaagsan ayuu kaga war qabaa, sida aan u qadariyo ciyaaryahan ahaan, waan ku faraxsanaa wixii uu sameeyey kulankii Chelsea”.
“Hadii aan guul gaari lahayn, waxaa laga hadli lahaa, dadaalkii uu ku bixiyay kulankii Chelsea iyo qaabkii uu goosha u dhaliyay, waa ciyaaryahan xirfadle ah, waan arki doonaa hadii uu ogolaado shuruudaha heshiiska cusub”.
Dhanka kale Barcelona ayaa dooneysa inay la saxiixato Juan Mata, laakiin waxay ku xiran tahay in ciyaaryahanka reer Spain uu hoos u dhigo mushaarkiisa, si loo suuragaliyo heshiiska uu ku imaanayo garoonka Cump Nou.
Barcelona oo la diyaar ah labo laacib si ay Arsenal uga soo qaadato Alexandre Lacazette
“Uma maleynayo inay jirto, rajo ay Liverpool ugu soo laaban karto garoonka Anfield” - Mourinho